Uma-Tudheyaasha Qoysaskoodu, Qaranka Waxba uma Aha | Somaliland Post News
Home Maqaallo Uma-Tudheyaasha Qoysaskoodu, Qaranka Waxba uma Aha
WQ Xuseen Cali Nuur
Qof kasta oo miyir qaba, hadaf kasta iyo ujeeddooyin kala duwan inkasta oo uu leeyahay, waxa uu og yahay in shacbigu yahay hantida ma guuraanka ah ee dal leeyahay.
Ammaanada oo sida diintu ina farayso loo fuliyo faa’iidada, waxtarka iyo sumcadda ay leedahay- waxa tusaale ahaan inoogu filan doorashadii isku sidkanayd ee shacbi, xukuumad iyo mucaarid fahamka, wada-tashiga iyo wada-shaqeynta lagu qabtay. Natiijadooduna waxay noqotay sumcad caalamiya oo Jamhuuriyadda Somaliland yeelatay iyo lahaanshaha dareen waxqabasho oo midaysan oo lagu xaqiijin karo rabitaanka shacbiga iyo aayaha dambe ee dalkaba.
Qoysaska waxaan xasuusinayaa ma-tudheyaashani in aanay damaanad u hayn, danaysi mooyaane, badbaadada ubadka ay dhaleen, ooryaha ay qabaan iyo inta la noolba. Sidaas daraadeed maadaama oo hooyooyinku yihiin kuwa dhibaatada ugu weyni soo gaadhi karto, inay waxyaabaha ay ku tuhmaan inay lug ku leeyihiin xashiishada, khamriga iyo wixii edeb-darro ah ay kala xidhiidhaan ciidammada Bilayska iyo maamulka dawladaha Hoose.
Aan iska qabano ma-naxeyaasha ma tudheyaasha ah inta aanay qaranka dhaawac u geysan.